म्युजिक भिडियोमा बारम्बार किन चुक्दैछन् राजेश हमाल ? - Himali Patrika
म्युजिक भिडियोमा बारम्बार किन चुक्दैछन् राजेश हमाल ?
हिमाली पत्रिका १६ भाद्र २०७८, 3:14 pm
नायक राजेश हमाललाई केही संस्थाले ‘महानायक’को उपाधि दिएका छन् । राजेश हमाल चलचित्र क्षेत्रको ‘महानायक’ हुन् या होइनन् भन्ने बहस बेला–बेलामा हुने गर्दछ । गतबर्ष निर्देशक दीपाश्री निरौलाले ‘राजेश हमाल महानायक हुन् र ?’ भन्दै दिएको एक अभिव्यक्तिले ठूलो विवाद खडा गर्यो । दीपाले यो बिषयमा बारम्बार माफी पनि मागिन् । राजेशले पनि घुमाउरो शैलीमा आफू नै ‘महानायक’ भएको दाबी प्रस्तुत नगरेका होइनन् ।
तर, राजेश हमालले चलचित्र क्षेत्रमा लामो समय बिताइरहँदा उनले गरेका केही कामहरुको भने बेला–बेलामा टिप्पणी र आलोचना हुने गरेको छ । अझ, लकडाउनपछि बनेका म्युजिक भिडियोमा हमालले गरेको कामको टिप्पणी सामाजिक संजालमा पनि हुन थालेको छ ।
हालै मात्र, राजेशले मोडलिङ गरेको ‘नाचन कान्छी’ बोलको गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । यो भिडियोमा राजेश हमाललाई नयाँ गेटअपमा त प्रस्तुत गरिएको छ ।
केही हट मोडलहरुको साथमा स्विमिङ पूलमा रमाउँदै गरेका राजेश हमालको अवतार भने उनकै फ्यानहरुलाई पनि चित्त वुझेको छैन । यसैले, सामाजिक संजालमा राजेश हमालको चर्को आलोचना भैरहेको छ । यो गीतको भिडियोमा काम गरेर राजेश हमालले आफू ‘महानायक’ हुँ भन्ने नै विर्सिएको धेरैको तर्क छ । युटुबमा पनि राजेश हमालले गीत रोज्दा धेरै ध्यान दिनुपर्ने र आफ्नो पोजिसन ख्याल गर्नुपर्ने भन्दै आलोचना भैरहेको छ ।
उसो त, राजेश हमालले लकडाउनपछि काम गरेका अधिकांश गीतले खासै चर्चा पाउन सकेनन् । गीतमा हमाल राख्दा पनि मेकरले गतिलो भ्यूज पाउन सकेका छैनन् । यसैले, पनि राजेशले भिडियोमा काम गर्दा कमसेकम गीतको अडियो र मेकिङको बारेमा राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्र काम गर्नुपर्ने धेरैको तर्क छ ।